यस्ता स’मस्या भएको बेलामा कागती खानुभयमा ,हुन सक्छ वि’ष सरह सतर्क रहनुहोला ! – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीयस्ता स’मस्या भएको बेलामा कागती खानुभयमा ,हुन सक्छ वि’ष सरह सतर्क रहनुहोला !
यस्ता स’मस्या भएको बेलामा कागती खानुभयमा ,हुन सक्छ वि’ष सरह सतर्क रहनुहोला !
December 23, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 2702
यस्ता स’मस्या भएको बेलामा कागती खानुभयमा , हुन सक्छ वि’ष सरह सतर्क रहनुहोला!
हाम्रो घर वरीपरी र बजारमा कागती सजिलै पाइन्छ । स्वादमा अमिलो हुने कागतीमा प्रशस्त भिटामिन ‘सी’ पाइन्छ । यसको से’वन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फा’इदाजनक मानिन्छ ।
तर कुनै बेला कागती शरिरको लागि बे’फाइदा पनि हुन्छ । अ’म्लीय तत्व हुने कागतीको धेरै से’वन गरेमा वि’ष सरह पनि हुन सक्छ ।
त्यसैले कागती धेरै से’वन पनि गर्नुहुँदैन । यदि तपाइको पेटमा कुनै स’मस्या छ भने कागती से’वन नगर्नुहोस् । यस्तो बेला कागती से’वन गरेमा झन पेटमा स’मस्या हुन्छ ।
यदि तपाइले अनुहारको दा’गधब्बा र ड’ण्डीफोरको उपचारको लागि कागती प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, भने पनि बिशेष ख्याल गर्नुपर्छ । तपाईको छाला कालो वा डढेको जस्तो भने ड’ण्डीफोरको उपचारको लागि कागती प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
यसले पा’क्न लागेको ड’ण्डीफोर छ भने झन स’मस्या नि’म्ताउछ । त्यस्तै यदि मृगौला तथा पित्तथैलीमा स’मस्या छ भने यसको से’वन गर्नुहुँदैन ।
यदि तपाईको छात्ति पो’ल्ने स’मस्या छ भने पनि कागतीको से’वन गर्नुहुँदैन । यस्तो बेला कागतीको से’वन गरेमा झन स’मस्या ल्याउछ ।
प्रायः अचारको रूपमा प्रयोग गरिने पुदिना औषधीय गुणले भरीपूर्ण हुन्छ। पुदिना अन्य विभिन्न कारणले पनि उपयोगी छ । पुदिनामा क्यालोरी, फाइबर, भिटामिन ए, आइरन, म्याग्निज, फालेटजस्ता हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पोषणतत्व पाइन्छ । त्यसैले, यो धेरै प्रकारका औषधि बनाउनसमेत प्रयोग गरिन्छ ।
पुदिना सेवनले पाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्छ । पेटमा कुनै प्रकारको समस्या देखिएमा पनि पुदिनाको चिया बनाएर पिउन सकिन्छ । दिनाले मुखको र’याल ग्रन्थीलाई सक्रिय बनाउँछ । र’याल ग्रन्थीले पाचन इन्जाइम निकाल्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
कलेजोले राम्रोसँग काम गर्न छाडेको छ भने पनि पुदिना खान सकिन्छ । यसले कलेजोसम्बन्धी कैयाँ’समस्याबाट मुक्त बनाउँछ । एक अनुसन्धानअनुसार पुदिनाको प्रयोगले मस्तिष्कलाई पनि फाइदा पुर’याउँछ । मुदिनाले मस्तिष्कको कामलाई सक्रिय बनाउनुका साथै धारण शक्तिलाई पनि बलियो बनाउँछ । यसले सम्झिन सक्ने क्षमतालाई पनि बढोत्तरी गर्छ ।
पुदिनाले तौल घटाउनमा पनि भूमिका खेल्छ । पुदिनाले फरक–फरक प्रकारका पाचन इन्जाइम उत्पादन गर्न प्रेरित गर्छ । र, हामीले खाएका खानाबाट त्यस्ता इन्जााइमको उत्पादन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शरीरले बोसो एकत्रित गरी ऊर्जामा परिवर्तन गर्छ ।
पुदिनाले दाँत र मुखलाई पनि स्वस्थ राख्ने काम गर्छ । यसले साससमेत ताजा बनाउँछ । यसका साथै पुदिनाले शरीरमा रोगप्रतिरोधी क्षमतासमेत बलियो बनाउनमा भूमिका खेल्छ । पुदिनाले मुखमा उत्पादन हुने खराब ब्याक्टेरियाको विकासलाई रोक्ने काम गर्छ । जसले गर्दा दाँत र जिब्रोलाई स्वस्थ राख्नुका साथै सफा पनि गर्छ ।
पुदिनाले क्यान्सरजस्तो समस्याबाट बचाउनका लागि सहयोगी काम गर्छ । किनकि, यसमा क्यान्सरसँग लड्ने इन्जाइम हुन्छ । पुदिनाले रगतलाई सफा गर्ने काम गर्छ । यसका साथै शरीरको शान्त मांशपेशीमा ‘एन्टिस्पास्मोडिक इफेक्ट’ पार्छ । जसका कारण महिलाको महिनावारीमा हुने दुखाइसमेत कम गर्छ ।
पुदिनाको चिया बनाएर पिउँदा तनावबाट पनि टाढा रहन सकिन्छ । यसले मांशपेशी र जोर्नीको दुखाइमा राहत प्रदान गर्छ ।
जे माग्यो तेहि पूरा हुने मन्डली अचम्म परम्परा भएको मन्दिर रुख काट्दा रगत निस्किने ॐ लेखी भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस् तपाईको मनोकामना पूरा हुनेछ (भिडियो सहित)
झा,डीमा भेटियो २ दिनको छोरी,पहिलोपटक मिडियामा,कृपया मन थामेर (हेर्नुहोला भिडियो)
January 6, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 9775
December 24, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 5515
November 25, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 11167
LEX 18 agenda conversation: Job club (486408)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458512)